Ndị nwụrụ anwụ ka ndị a na-emegbu emegbu mma (1-3)
Otú e kwesịrị isi na-arụ ọrụ (4-6)
Uru enyi bara (7-12)
Abụọ dị mma karịa otu (9)
Ndụ eze nwere ike ịbụ ihe efu (13-16)
4 M chebakwaara mmegbu niile a na-emegbu ndị mmadụ n’ụwa* echiche. M hụrụ ka anya mmiri na-agba ndị a na-emegbu emegbu, ma e nweghị onye na-akasi ha obi.+ Ọ bụkwa ndị nọ n’isi na-emegbu ha, ma e nweghị onye na-akasi ha obi. 2 M wee kwuo na ndị nwụrụ anwụ ka ndị dị ndụ mma.+ 3 Ma onye ka ha abụọ mma bụ onye a na-amụbeghị amụ,+ onye na-ahụbeghị ihe ọjọọ ndị a na-eme n’ụwa.*+ 4 Ahụkwala m otú ndị mmadụ si na-agbasi mbọ ike ma jiri nkà na-arụ ọrụ ka ha wee gosi na ha ka ibe ha.+ Ihe a bụkwa ihe efu. Ọ bụ ịchụ ifufe. 5 Onye nzuzu na-anọ otu ebe kụkụwa aka ya, ndụ ya ana-ala n’iyi.*+ 6 Mmadụ izurutụ ike dị mma karịa mmadụ ịrụgbu onwe ya n’ọrụ na ịchụ ifufe.+ 7 M chebaara ihe ọzọ bụ́ ihe efu n’ụwa* echiche: 8 E nwere otu onye nọ naanị ya. E nweghị onye ya na ya nọ. O nweghị nwa ma ọ bụ nwanne. Ma ọ na-arụsi ọrụ ike mgbe niile. Akụnụba anaghị eju ya eju.+ Ma ọ̀ na-ajụ onwe ya, sị, ‘Ònye ka m na-arụrụ ọrụ a m na-arụsi ike ma ghara ịna-ekpori ndụ’?+ Ihe a bụkwa ihe efu, bụrụkwa ọrụ ahụhụ.+ 9 Abụọ dị mma karịa otu+ n’ihi na a ga-akwụ ha ezigbo ụgwọ ọrụ maka ọrụ ha na-arụsi ike. 10 N’ihi na ọ bụrụ na otu onye n’ime ha adaa, onye nke ọzọ ga-enyere ya aka ka o bilie. Ma gịnị ga-eme ma otu onye daa mgbe a na-enweghị onye ga-enyere ya aka ka o bilie? 11 Ọ bụrụkwa na mmadụ abụọ edinakọta ọnụ, ahụ́ ga-ekporo ha ọkụ. Ma, olee otú ahụ́ ga-esi kporo naanị otu onye ọkụ? 12 Otu onye nwere ike imeri onye nọ naanị ya, ma mmadụ abụọ gbakọrọ aka nwere ike imeri onye ahụ. Ụdọ e ji eriri atọ tụọ, a gaghị adọbili ya ngwa ngwa. 13 Nwata nke ma ihe ma bụrụ ogbenye ka eze nke mere agadi ma dị iberiibe mma,+ bụ́ onye na-anaghị anabata aka ná ntị a na-adọ ya maka na o nweghịzi uche.+ 14 N’ihi na o* si n’ụlọ mkpọrọ pụta ghọọ eze,+ n’agbanyeghị na ọ bụ ogbenye mgbe a mụrụ ya n’oge eze ahụ nke mere agadi na-achị.+ 15 M chebaara ndị niile dị ndụ echiche, bụ́ ndị na-ejegharị n’ụwa,* chebakwara otú ihe si agara nwata ahụ nke nọchiri eze ahụ echiche. 16 Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ndị na-akwado ya, e mechaa, ihe ya agaghị amasị ndị mmadụ.+ Ihe a bụkwa ihe efu. Ọ bụ ịchụ ifufe.
^ Na Hibru, “na-eri anụ onwe ya.”
^ O nwere ike ịbụ nwata ahụ ma ihe ka a na-ekwu.